Japana: Mandona Be Ilay Amerikana Iray Mpihira Enka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2018 20:28 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Jero, Amerikana voalohany indrindra mpihira enka, no lasa fotodresaka ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Japoney tamin'ny herinandro lasa teo rehefa namoaka ny hirany voalohany miaraka amin'ny singankirany “Umiyuki (Mer de Neige)” izy. Tonga teo amin'ny laharana fahefatra tao anatin'ny fandaharan-kiran'ny Oricon ilay singankira, nametraka rakitsoratra teo amin'ny enka sy tao amin'ny Laharana 10 voalohany ho anà singakira enka voalohany.
Niteny i 1ko2ko3kon fa nanome aina vao ny enka i Jero:
Efa nahavita nanome aina vao ho anà fiarahamonin'ny enka izay tafajanona tanaty fahazarana i Jero. Mahafinaritra be izany. Tena manantena aho fa hanome aingampanahy an'ireo mpanoratra tononkira, mpamoronkira ary mpihira ny hatsaran'ny enka an'i Jero mba hanitarana ny fetran'ny kayōkyoku.
Mahita fitovizana misimisy eo aminy sy i Jero ary maniry ny fahombiazan'ilay mpihira i Dan Markoff, Amerikana mpilalao horonantsary miezaka ny hipetraka ao Japana.
Etsy andaniny, tsy tena resy lahatra tanteraka ity bilaogera iray ity:
Mampiseho fijery hafa i mario in bonn. Miteny izy fa matimaty loatra amin'ny “maha-Japoney azy” ny vahoaka Japoney: